Faah faahin:- Weerar lagu qaaday hoteel ay degan yihiin qaar ka mid ah ergooyinka ku sugan Garoowe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar lagu qaaday hoteel ay degan yihiin qaar ka mid ah ergooyinka ku sugan Garoowe
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa kooxo hubeysan oo habeenkii xalay weerar culus ku qaaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Hoteelkaasi ayaa la sheegay inay deganaayeen qaar ka mid ah ergada soo xuleeysa xubanaha Punland u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Weerarkaan ayaa la sheegayaa inuu salka ku haayo, cabasho ka timid mid ka mid ah qabaa’ilka dega deegaanada Puntland, kaas oo ka cabanaya qaabkii loo soo xulay xubnaha Puntland u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ma jiro wax qasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi, waxaana haatan goobta uu weerarka ka dhacay ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee maamulka Puntland.
Dhinaca kale, mas’uul ka tirsan maamulka Puntland oo aynu qadka teleefanka kula xiriiray ayaa sheegay in weerarkaasi uusan wax qasaare ah geysan, islamarkaana uu ahaa mid lagu qal-qal galinaayo doorashada la qorsheynayo inay maanta ka dhacdo magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan lama oga saameynta uu weerarkaasi ku yeelan karo doorashadda haatan ka bilaabatay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, iyadoona sidoo kale ammaanka magaaladaasi maanta si aad ah loo adkeeyay.